तेह्रथुमको चुनाव : इतिहास जोगाउने र नयाँ इतिहास रच्नेबीच टक्कर ! – Everest Dainik – News from Nepal
तेह्रथुमको चुनाव : इतिहास जोगाउने र नयाँ इतिहास रच्नेबीच टक्कर !
काठमाडौं, कात्तिक ३० । प्रदेश नं. १ को पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा चुनावी सरगर्मी निकै तातेको छ । जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरु अहिले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न आश्वासन बाँड्दै गाउँ–गाउँ पुगिरहेका छन् ।
जिल्लाबाट यसअघि चुनाव जितेकालाई आफ्नो आधार क्षेत्र जोगाउने र पराजित भएकाहरु नयाँ इतिहास रच्ने ध्यानमा देखिन्छन् ।
जिल्लामा एघार वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएपनि लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धनबीचमा कडा प्रतिष्पर्धा छ । यी दुई गठबन्धनबीचमा अहिले गाउँ–गाउँ पुग्न, कार्यकर्ता परिचालित गर्न, घरदैलो गर्न, मतदातालाई आफ्नो पार्टीमा भित्राउन/प्रभावित पार्न नेता कार्यकर्ताहरु बीच कडा टकराव चलिराखको छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा कांग्रेसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन छ भने बाम गठबन्धनमा एमालेलाई माओवादी केन्द्रको समर्थन छ । अझ बाम गठबन्धनका नेताहरु दुई दलबीचको गठबन्धन प्रभावकारी नहोला कि ? भन्ने भयले कार्यकर्ताको घर–घरसम्म पुगेर वाम एकता पार्टी एकतासम्मका लागि भएको भन्दै बुझाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।
एक मात्रै चुनाव क्षेत्र रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि कांग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य तथा भौतिक पुर्वाधार राज्यमन्त्री सीता गुरुङ र बाम गठबन्धनका लागि एमालेका निवर्तमान सांसद भवानीप्रसाद खापुङको प्रतिष्पर्धा रोचक बनेको छ । कांग्रेस, केन्द्रिय कार्य समितिको दोश्रो पटक निर्वाचित सदस्य बनेकी नेतृ गुरुङ संविधान सभा–१ र २ मा निरन्तर जिल्लाबाटै समानुपातिक सांसद भएकी थिइन् ।
एमालेबाट तेश्रो पटक उम्मेदवार बनेका नेता खापुङ ०७० को संविधान सभा चुनावमा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । त्यसअघि ०६४ को संविधान सभा चुनावमा खापुङ कांग्रेसका तुलसी सुब्बासँग पराजित भएका थिए । ०७० मा खापुङले कांग्रेसका सुब्बालाई नै पराजित गरेका थिए । कांग्रेसकी उम्मेदवार गुरुङ पहिलो पटक प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेकी युवा नेतृ हुन् ।
एमालेका खापुङ एक पटक जित/हार दुवैको अनुभव संगालिसकेका नेता हुन् । बहुदल स्थापनापछिका सबै चुनावमा निरन्तर एमालेले नै जित्दै आएको जिल्लामा अचानक ०६४ मा कांग्रेसले जित्यो । तर टिकाउन सकेनँ । ०७० मा एमालेले पुनः आफ्नो पुरानो इतिहास कायम गर्न सक्यो । स्थानीय चुनावमा पनि एमाले ६ मध्ये पाँच स्थानीय तहमा विजयी भयो । तेश्रो शक्तिको रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावबाट एउटा वडाध्यक्षमात्रै जिताउन सक्यो । यहाँका मतदाता शिक्षित मानिन्छन् । तर पछिल्लो दशकमा यस्ता राजनीतिक उतार चढाव निरन्तर छन् ।
एमालेका उम्मेदवार खापुङ ०७० को आफ्नो जितलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् भने कांग्रेसकी उम्मेदवारी गुरुङ आफुले दुई पटक समानुपातिक हुँदा गरेको कामको फल चुनावबाट लिन चाहन्छिन् । जिल्लाबाट एक्ली महिला उम्मेदवार बनेकी गुरुङ प्रत्यक्ष निर्वाचित अहिलेसम्मकै एक्ली महिला नेतृ बनेर अर्को इतिहास बनाउन चाहन्छिन् । निर्वाचित सांसद हुँदासमेत कार्यकर्ताको भावना बमोजिम काम गर्न नसकेको आरोप एमाले नेता खापुङलाई छ । तर अहिले माओवादीको समेत मत थपिएपछि मजबुद संगठन खापुङको पक्षमा छ ।
जिल्लाबाट पार्टीको केन्द्रिय सदस्य र सरकारको राज्यमन्त्री सम्म भएकी गुरुङबाट समेत अपेक्षाकृत काम नभएको मतदाताको गुनासो छँदैछ । तर उनी जिल्लाबाट पछिल्लो झण्डै अढाई दशकको अवधिमा सरकारको मन्त्री हुने एक्ली नेतृ हुन् । उनी प्रत्यक्षतर्फ पहिलो पटक उम्मेदवार बनेकी हुन् । त्यसकारण मतदाताको विश्वास एक पटक उनीमाथि अडिन पनि सक्छ । त्यसो त मतदाताले कति बेला ? कसलाई रोज्छन् ? भन्ने मनोवैज्ञानिक अन्दाज लगाउन कठिन छ ।
यद्यपि इतिहास जोगाउन तल्लीन एमाले उम्मेदवार खापुङ र इतिहास बनाउने दाउमा रहेकी कांग्रेस नेतृ गुरुङबीचको चुनावी प्रतिष्पर्धा उत्कर्षमा छ । प्रतिनिधि सभामा गुरुङ र खापुङसँगै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका शंकरमान लिम्बु, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका टंकबहादुर भट्टराई, नेकपा मालेका डिल्ली बुढाथोकी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका गंगाबहादुर चोङवाङ, संघीय समाजवादी फोरमका तिर्थ अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हरिलाल अधिकारी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका कालीबहादुर फुदोङ, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका गौरी प्रसाद कन्दङवा र जनमुक्ति पार्टीका सागरनाथ रेग्मीको उम्मेदवारी रहेको छ । सबै उम्मेदवार मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न भन्दै गाउँ गाउँ पुग्न व्यस्त रहेका छन् ।
जिल्लाबाट प्रदेशको चुनावमा समेत बौद्धिक र राजनीतिक रुपमा ख्याति कमाएका नेताहरु प्रतिष्पर्धी बनेपछि प्रदेश चुनाव समेत उत्तिकै रोचक छ । प्रदेश सभा (क) मा कांग्रेस जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द ढुंगाना र एमाले जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी भिडदैछन् । ढुंगाना आफ्नो कार्यकालमा भत्किएको इतिहासलाई जोडघटाउ मिलाएर नयाँ इतिहास बनाउने दाउमा छन् भने तिवारी जोगाउने होडमा कुदिरहेका छन् । त्यसो त संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आफैँमा पनि ऐतिहासिक छ ।
प्रदेश सभा (ख) मा अझै बौद्धिक प्रतिष्पर्धा छ । कांग्रेसबाट प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे र एमालेका पुर्वजिल्ला अध्यक्ष तेजमान कन्दङवा यो क्षेत्रमा भिड्दैछन् । प्रदेश सभा (क) मा ढुंगाना र तिवारीसँगै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष देउनारायण सम्बाहाम्फे, संघीय समाजवादी फोरमका सुर्य मादेन, नयाँ शक्ति नेपालका जिल्ला संयोजक विष्णुप्रसाद दाहाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका डालेश्वर लिम्बु, नेकपा मालेका माधव खनाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सुर्यबहादुर थापा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका धनराज कन्दङवा मैदानमा छन् ।
प्रदेश सभा (ख) निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका सम्बाहाम्फे र एमालेका कन्दङवासँगै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका डम्बर लिम्बु, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मानबहादुर लिम्बु, संघीय समाजवादी फोरमका मानध्वज सम्बाहाम्फे, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका यशोदादेवी कार्की, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका राजेन्द्र कन्दङवा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका विष्णुकुमार चोङवाङ चुनावी मैदानमा छन् । नयाँपत्रिकाबाट
भेट्न बोलाएर प्रेमिकाले गरिन् प्रेमीको लिङ्ग छेदन